कानून/न्याय – Page3– Lokpati.com
अपराध नेपाली काँग्रेस पक्राउ चितवन केपी शर्मा ओली प्रचण्ड सरकार मृत्यु अमेरिका राशिफल नेकपा नेपाल प्रहरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री
ललितानिवास जग्गा प्रकरण : को-को विरुद्ध मुद्दा ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, २२ माघ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न १ सय ७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।बुधबार अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार,…
विजय गच्छदार : अख्तियारले छाेप्याे ठूलाे माछा !
२२ माघ,काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतःनिलम्बित भएका छन्। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदार प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट स्वतःनिलम्बित भएका…
ललिता निवास प्रकरणः विजय गच्छादारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं। बालुवाटारमा रहेको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ। आज विशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको हो। अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम्…
उच्च अदालतले बालुवाटार प्रकरणको कागजात माग्यो
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ । उच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान लगायतबाट संस्थाबाट तथ्यगत कागजात माग गरको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशीको मुद्दामा उच्च…
राष्ट्र बैंककाे कडा निर्देशन : फेसबुक, युट्युव र गुगलमा विज्ञापन दिए मुद्दा
काठमाडौं, १७ माघ। अब सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ। फेसबुक, ट्वीटर, युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन गैरकानूनी भएको भन्दै कसैले गरेमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको हो। पछिल्लो समय कतिपय…
काठमाडौं, १४ माघ। गायिका आस्था राउत ४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएकी छन्। काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले राउतलाई चार हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएका हुन्। काठमाडौंका सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी कृृष्णबहादुर…
काठमाडौं, १४ माघ । गायिका आस्था राउतलाई सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेकी गायिका राउतलाई मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराइएको हो। राउतलाई सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारी…
गायिका आस्था राउतलाई हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं, १३ माघ । गायिका आस्था राउतलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति दिएको छ। सोमबार बिहान प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेकी गायिका राउतलाई काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् म्याद थपका लागि…
सांसद मनाङ्गे रिहा
पोखरा, १२ माघ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङ्गे भनिने राजिव गुरुड धरौटीमा रिहा भएका छन्।मनाङ्गे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ६ हजार धरौटी बुझाएर आइतबार रिहा भएका हुन् । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुलमाथि…
सर्वाेच्च अदालतले भन्याे : अग्नि सापकोटा निर्दाेष छन्
काठमाडौं, १२ माघ। प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार रहेका नेता अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा नरहेको पाइएको छ। नेकपाले निर्विरोध सभामूख बनाउने निर्णय गरेपछि सापकोटालाई युद्धकालिन मुद्दा भएका कारण सभामूख बनाउन नहुने भन्दै विरोध…